Minisitra Atallah Béatrice : “Ilaina ny diplaomasia mitondra vokatra…” | NewsMada
Fanotana fady sy fanimbazimbana: vaky ny fasana miisa 11 an’ny mpanjaka Mahafalin’i Linta
Manifestation politique à Soamandrakizay: pas très catholique
Minisitra Atallah Béatrice : “Ilaina ny diplaomasia mitondra vokatra…”
Par Taratra sur 23/12/2016
Niarahaba sy nirary soa ny vahoaka Malagasy ary ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny minisitera ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, omaly, mialoha ny fetin’ny Noely. Notsindriny manokana ny ho endriky ny diplaomasia amin’ny taona ho avy.
“Tsy hionona amin’ny diplomasia an-taratasy isika fa mila saina tia manadihady mba tena ho tombontsoa azo tsapain’ny tanana ny vokatra mivoaka. Hitombo ny mpamatsy vola sy mpampiasa vola noho ny diplomasia, hitombo ny asa foronina noho ny diplomasia, hiroborobo ny fizahantany noho ny diplomasia, hiakatra ny fanondranana entana any ivelany noho ny diplomasia”, hoy izy tetsy Anosy. Maniry ny tenany mba ho tsapan’ny rehetra fa fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny diplomasia volavolain’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
Notsiahiviny avy eo ny andraikitra lehibe nosahanin’ny mpiasa teto amin’ny firenena ho an’ny taona 2016. Anisan’izany ny nandraisana ny fivorian’ny Comesa sy ny Frankofonia. “Vitantsika araka ny fenitra notakina izany. Mitsotra aminareo aho fa afaka mirehareha amin’ny kalitaon’ny asa vitanareo mpiasan’ny minisitera aho”, hoy ny minisitra. Namaranany izany ny antso avo ho amin’ny firaisankina, tsy hisara-mianakavy, hifanohana raha miaka-piakarana, hifampitsinjo raha midim-pidinana, hifampitanana raha mizotra an-tany marina.
Madagasikara-Japon: mitotaly 607 tapitrisa Ar ny fanampiana roa sosona 03/03/2021
Rajoelina Mialy tany Toliara: “Zava-dehibe ny fanohanana ny asa fiveloman’ny vehivavy” 03/03/2021
CUA-NextA « Hackaton »: misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana 03/03/2021
Rugby: hametraka olona sy hidina ifotony ny FTMR 6 03/03/2021
Kitra – Fifanintsanana “Can 2022”: ho fantatra anio izay mpilalao handrafitra ny Barea 03/03/2021